Jamba iray maso dia mandray alika kely iray | Tontolo alika
Jamba mana-maso iray no mandray zanak'alika kely iray
Raha misy ny mpivady lavorary. Izany dia tsy maintsy noheverin'ny zanakalahin'i Jordan Trent, a Amerikanina very ny masony havia niasa teny an-tokotany tamin'izaho 15 taona. Efa 32 taona sahady ary mitady alika kely ho an'ny fianakaviana dia nahita zanak'alika kely tsy mahita izy ireo. Azo antoka fa toa famantarana izany.
Este alika kely tsy misy mila azy, satria tsy ny olona rehetra no manana fangorahana ampy hahita fiainana fa tsy famenon-javatra tonga lafatra amin'ny trano. Fantatsika fa ny fivarotana biby dia mifantoka amin'ny hazakazaka sy toetra mampiavaka azy, toy ny hoe zavatra izy ireo, ka ireo tsy lavorary dia avela. Saingy satria tianay ny mandray sy mitia ny olona volo rehetra, dia toa mahafatifaty sy lavorary ity alika ity.
Nanjary nalaza ity alika kely ity sy ny tompony rehefa nandefa azy ireo tamin'ny media sosialy ny rahavavin'i Jordan, Kendra Tent, 27 taona, nahazo fanohanana lehibe. Nandeha teny an-tsena niaraka tamin'ny zanany kely i Jordan Trent mba hitady alika raiso ho isan'ny andian'ondrinao, ary gaga izy ireo rehefa nahita an'ity zanak'osy aostraliana mpiandry ondry kely iray very maso iray ity. Avy hatrany dia nilaza taminy ny zanakalahin'i Jordania hoe: 'Jamba amin'ny masony tahaka ny dadanao izy, tsy maintsy esorinay izy!' Raha tsy misy fisalasalana, ny maha-voajanahary ny zaza dia tsy misy farany.
Satria toa tsy nisy olon-kafa tia ilay alika ary tamin'izy ireo dia toa lavorary izany, rehefa nentin'izy ireo nody. amin'izao fotoana izao kely Shiner Solo Miaina am-pifaliana miaraka amin'ny tompony vaovao izy, izay iombarany toetra mampiavaka azy. Saingy tsy maninona izany, satria ny zava-dehibe dia ny tarehy falifaly hitan'ny alik'alika ao an-tranony vaovao. Aza adino amin'ny tantara toy izao fa mendrika vintana daholo isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » curiosities » Jamba mana-maso iray no mandray zanak'alika kely iray
Fa maninona ny alikantsika no tsy tokony hilalao baolina tenisy?